Lapho uthenga ifulethi, abantu bavame ukunikeza iningi imali yabo, ngakho usizo isimo ngeke engadingekile. Kungenzeka ukuba alulame abanye imali, uma akhiphe ngekulandzelana kwetintfo letenteka.
Inani imali yentela
Ukuze ingcebo, okuyinto itholwe yi inkokhelo yesikhathi esisodwa, ukubuyiselwa kwemali yentela overpaid ibalwa ngokugcwele, uma inani lentengo into akuyona ruble ezingaphezu kuka-2000000. Lapho uthenga ingcebo kuyilapho sidebeselela mortgage muntu uzokwazi ukuthola isinxephezelo ngokugcwele kuphela uma ukubaluleka impahla ingeqi ruble 6000000.
Inani nokudoswa, futhi leyo mali kunqunywa isimo, ibalwa kuphela kusukela Imali ekhokhwa abantu mathupha, lapho kwenziwe ukuthengwa ifulethi. ukubuyiselwa imali yentela yemali engenayo akuyona kwenziwe ukuze kuqaliswe uhlelo inkokhelo eyengeziwe, ngeke inzuzo. Uma yokufuna ingcebo ikhishwa abanikazi eziningana, ngamunye wabo uthola inkokhelo yakho yentela ukuze kangangoba okulingana izingxenye matasa egumbini lokuphumula.
Izici Ezihilelekile Kule imali yentela
Lapho umuntu othenga impahla ngentengo ruble esingaphansi 2000000, noma ngisho eminyakeni embalwa ongafinyelela isamba olahlekile siyolanda egcwele isinxephezelo, kunokuba ekubaleni iphesenti yokufuna omusha ngamunye.
Uma umuntu kanyekanye waziphatha ukudayiswa ingcebo, lapho ahlala khona waze muva bese wanquma ukuthenga into entsha, 13% of ukuqhutshwa avunyelwe ukuthumela sokukhokhwa kwentela kusukela ukudayiswa of efulethini lakhe. Lokhu kusebenza kungenziwa kuphela edingekayo naphezu kweqiniso lokuthi impahla is owned by iminyaka engaphezu 3.
Abantu banelungelo lokuthola imali yentela
Abantu ubuzwe we Russian Federation, ngesikhathi esifanayo babe engenayo olusemthethweni, isamba okuyinto siqu kwentela engenayo ezibanjwayo ukuze kwenziwe njalo. Lokhu kungenxa yokuthi uma isakhamuzi okhokhela 13% yomholo esimweni ke, unelungelo lokuthola imali, ngokufanayo, lapho ngikwazi ukuthenga impahla.
izakhamizi Yedwa Russian Federation Unelungelo isicelo sokukhokha imali yentela. Kulokhu, balindeleke ukuba bakwazi ukuhlala phakathi kwemingcele ezungeze imibuso WaseRussia sezinsuku ezingengaphansi kwezingamashumi 183. Kuyaphawuleka ukuthi leli gama akuvunyelwe ukuba aphule, ukuthi, uma umuntu kwadingeka ukuba wake bahambe ngaphandle isimo ekubaleni kulezi zinsuku, inombolo yabo kukhanselwa, njengokungathi zibuyisela ukuphila uzophinde ukubala ngosuku lokuqala.
abahambi unomphela lokhu kunzima kakhulu ukuthola isinxephezelo. Ayifanelekele abantu, uhlobo umsebenzi okhokhelwayo okuyinto babephakathi yezandla. Kufanele uqinisekise ukuthi umuntu uthola iholo kusukela lolu hlobo lomsebenzi. Lesi sigaba angawi futhi ngokusemthethweni abangasebenzi.
Abahola impesheni, iholo njalo ruble ezingaphezu kuka-5534. Kumelwe wenze ngokwabo futhi usazoba ukuthi isikhathi esisukela kumhla emsebenzini, ukukhokhela nyanga intela engenayo. Le mali kufanele ngokusemthethweni avele inyanga ngayinye owayesethathe umhlala-phansi, njengoba intela ingakhokhwa kusukela impesheni.
izingane ezincane. Ungakwazi yokuwuthola izivimbelo esakhiwa ngo ikhono lakhe lomthetho akuphelele, yize noma iyiphi ingxenye impahla ngokushesha wakhipha ingane. Ngoba kumelwe afake isicelo, ukunikeza wonke amaphepha abazali bakhe noma ababheki zomthetho.
Abantu abangekho ufaneleke ukuthola imali yentela
Semthethweni IP, njengoba umsebenzi wabo kubanike ithuba lokuthola imali nyangazonke ukuthi ingaphezu kwesilinganiso.
abantu zomthetho, njengoba igama lenhlangano angisophinde ngilubhade izintela.
izakhamuzi Ukusebenza abangafuni isici ngesisekelo ncwadi umsebenzi, njengoba kunjalo imisebenzi professional ngesisekelo inkontileka umsebenzi noma ngokungemthetho.
Ngokusemthethweni lutho stratum sabantu, ehlanganisa ku amarekhodi abangasebenzi.
Ukubuyiselwa kwemali yentela uma uthenga impahla ngentela
Imibhalo acace ehhovisi lentela lapho umuntu inikezwa ngesisekelo yokuhlala noma ukubhaliswa unomphela endaweni yokuhlala ethile kuphela. Kufanele kukhunjulwe ukuthi imali yentela uma uthenga Kwenziwa emva nokufakwa zonke izitifiketi ezidingekayo namalayisense.
Iphakheji kwemibhalo kungaba zithunyelwe nganoma yiluphi usuku, lapho ithola intela ethile. Ukubuyiselwa kwemali yentela kungenzeka ukuba ingenzele ngisho nangemva usuku umnqamulajuqu entela. imibhalo ehlobene okusho ukuthi ngemuva 30 Apreli kuyoba njengoba esemthethweni njengoba sigcwalisiwe ngaphambi kwalolo suku.
Ngokuvamile i-income tax imbuyiselo senziwa ngokwanele eside. Yini imibhalo ifakwa ehhovisi lentela, odinga ukukwazi kusengaphambili, pre-zihlangane ngokugcwele. Thatha ipasipoti Russian. Lapho befaka isicelo ezincane kudingeka isitifiketi sokuzalwa kwakhe.
Ngaphezu idatha eliyisisekelo ngokuthi ungubani komuntu, inqobo isimemezelo 3-PIT, etjengisa isithombe pheze ephelele yentela umuntu. Usizo 2 PIT nawo lisitshela ezibanjwayo, izimali ezibanjwayo asesidlangalaleni, kodwa ingase ikhishwe kuphela ngumqashi. Uma umuntu esanda kuphela waqala ukusebenza endaweni entsha, kumelwe ngesikhathi esifanayo ukunikeza isitifiketi esifanayo kusukela umsebenzi odlule. Ngokuvamile, ingase izitifiketi ezimbili ezidingekayo kunjalo uma umuntu usebenza endaweni entsha esingaphansi konyaka.
Gcwalisa imininingwane ye-akhawunti yakho yasebhange. Kufanele ukukhipha kubo ngokucophelela okukhulu, njengoba izibalo akufanele kube ngeziphambeko. Uma isicelo komuntu samukelwe, abasebenzi ngesikhathi esibekiwe inhlangano yentela akhawunti ukudlulisa imali ebalwe. Uma kukhona into ukugcwalisa kahle, asikho isiqinisekiso ukubuya lemali ku-akhawunti engeyiyo.
TIN Kuncike. Uma abantu abangakayitholi isikhathi ukuthola okuthile uyashesha ukuthatha ke, ungaba nomqashi wakho.
Sifuna amadokhumenti iwubufakazi ubunikazi othengiwe imali intela engenayo lapho uthenga impahla. Zitholakala ngokugcwele. Ngokuvamile kuba inkontileka sokuthengisa, nakuba lokhu kuvame isenzo ukwamukela ukudluliswa izindlu. Okusanda yokubhalisa yale mibhalo senzeka ukuze ngokomthetho basuke kuhlanganiswe, ukuthi kanyekanye ngocansi izitifiketi ezimbili.
Izici Document Element
Ngaphandle nezimemezelo kanye nezitatimende, nawo wonke amanye amaphepha okufakiwe liyakushunyayelwa enikeziwe noma yokuqala noma nginamalungelo amakhophi aqinisekisiwe ngokusemthethweni. Awunayo ukusebenzisa amasevisi ummeli olungisa izivumelwano. umuntu ngamunye ungaba qinisa ikhophi uqobo. Ukuze wenze lokhu, yasekuqaleni ngamunye kufanele asayine mathupha ngumfakisicelo, kufanele kube ukubhala inkulumo ethi "ikhophi yangempela."
Ngokuvamile yayisetshenziswa imibhalo eziyisisekelo, kodwa kuncike esifundeni kanye isimo esithile abasebenzi isevisi intela ingadinga ubufakazi obengeziwe. Kungcono ukuthatha nawe uma sihambe kwinhlangano yonke ohlobene kuluthola ingcebo ukuze ngempumelelo lelisu imali yentela overpaid.
Imigomo impahla kwentela yemali engenayo lapho uthenga
Ngaphambi kokuthumela imibhalo kudingeka ugcwalise isitatimende ekhethekile. Kuyadingeka ukukwenza ngokucophelela, njenganoma yikuphi ukungalungi ulwazi olunikeziwe kungaba isizathu sokwala ukubuya yentela ngemali engenayo.
Emva kokuhambisa yonke imibhalo edingekayo ithunyelwa abasebenzi isevisi intela. Ukubuyiselwa imali yentela uma uthenga ingcebo imigomo kuchazwa esikhulu kakhulu, ngoba intela uyothatha isinqumo sokuthi ngabe isizumbulu semali ezinyangeni ezintathu kusukela ngosuku lokuthola imibhalo.
Ngezinye izikhathi, abasebenzi lokuhlolwa intela kubangele umuntu ukuba acacise noma iyiphi imininingwane, kodwa kwenzeka kakhulu kuyaqabukela. Lapho kwenziwe ukuthengwa ifulethi, imali yentela engenayo ayikwazi ezivezwa wokuhlola intela, uma nanoma yimiphi imibhalo noma izimo alihambisani imithetho.
Uma isicelo sivunyiwe, ngemuva kokuphela esemthethweni isicelo ibalwa inani lemali idluliselwe abasebenzi intela ku-akhawunti yasebhange eshiwo ku isicelo. Unegunya ukusebenzisa lezi zimali noma iyiphi injongo njengoba lathuthela impahla yakhe.
yentela yemali engenayo ukubuya ngumqashi
Umuntu usezuze impahla, unelungelo ukucela imali yentela kusuka kumqashi wakho, okungukuthi, kusukela inhlangano, okuyinto esemthethweni umsebenzi. Izinkokhelo kungenziwa wathola ngendlela yokungakhokhi yentela ngemali engenayo, okungukuthi, umuntu uzothola iholo ngokuphelele. Lokhu ikhono inikezwe nje ukuba ucede zonke izimali sithembele umuntu.
Ukuze enze isicelo sokuthola leli fomu, ukuhlinzeka sokubuyiselwa imali yentela uma uthenga impahla, kuzomele uxhumane ehhovisi lentela ukuze uthole isitifiketi eqinisekisa umuntu unelungelo lokuthola ulwazi izinzuzo. Ukuze wenze lokhu, kufanele uhambise iphakethe eyisisekelo kwemibhalo Nokho, akudingeki ukuba kuthathe isimemezelo 3-PIT 2-PIT.
Iphakheji kwemibhalo wethulwa umqashi
Uma abasebenzi bemisebenzi intela evunyiwe isicelo, isitifiketi esikhishwe yi-umqashi liyadingeka. Kanye isitifiketi kudingekile ukunikeza uhlu amadokhumende:
Isitifiketi sokubhalisa amalungelo impahla ukuthenga ingcebo.
Incwadi yesivumelwano, okhombisa ukwedlulela ingcebo nempahla mathupha.
Noma iyiphi idokhumenti okufakazela ukudluliswa kweemali nomthengisi.
Ngesikhathi nekheli komqashi kufanele uhambise isicelo, okhombisa isicelo sokubuyiselwa imali yentela uma uthenga impahla ngokuthola amaholo egcwele, ongenakwenziwa emholweni izimali ehhovisi lentela. Lesi sitatimende kufanele sigcwaliswe kungakadluli ungakapheli unyaka ukusukela ngosuku esiphethweni olusemthethweni yesivumelwano elawula ukudluliselwa kobunikazi.
Ukuze enze imali yentela uma uthenga impahla, kuzomele uxhumane ehhovisi lentela bese uhambisa isicelo, kanye nalo lonke iphakethe kwemibhalo. Uma deal lufrenyiwe kahle, omunye kuqinisekisiwe ukuthola kwemali ekhokhiwe ukweletwa kuye ngokomthetho.
Pasta apelwe - ukudla okunempilo etafuleni lakho!
Anezikhala Plastic for uthango - material amasha
Nezimfumbe mayelana izinkanyezi - umsizi e ukuhlola umkhathi